Sangano reMen of Valor, Purpose and Vision Ministry Robatsira Vanakomana Kuti Vave VanaSaimba Vane Chiremera
Sangano ravarume vanoita zvechitendero reMen of Valor, Purpose and Vision Ministry kana kuti MVPV rinoti rine hurongwa hwekusimudzira vanakomana kuti vakwanise kuzoita vanasaimba vanoremekedzeka.
Mutungamiri wesangano iri VaSolomon Musonza vanoti zita resangano ravo rakabva mubhuku reMadzimambo kana kuti Kings 2:2 apo Mambo David vakaudza mwanakomana wavo Solomon kuti anofanira kuzviratidza semurume akashinga.
VaMusonza vaudza Studio 7 kuti, “Tine zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vanakomana. Tinotenda kuti kuti munhu azonzi baba vakarongeka anofanira kutanga ari mukomana kwaye, akarongeka. MVPV inodzidzisa nekubatsira vanakomana kuti vawe nehwaro hwakasimba nekuvapa mazano angavabatsire muhupenyu kuti kana vachinge vazokura vazowe vanababa vanogona kuzvibata nekuchengeta mhuri dzavo, kutungamira makereke avo kuye nekurarama zvakanaka vachichengetedza nyika nenharaunda dzavanogara.”
Vanoenderera mberi vachiti kukudzwa kwavakaitwa mubarika kwakavabatsira zvikuru kuti vanzwisise tsika nemagariro evanhu. “Ini zvichibva pakukura kwandakaita, mumba mababa vangu maive nemadzimai akawamda asi hatina kuzoita hupenyu hwakafanana. Vamwe vakagona kuronga hupenyu hwawo nemhuri dzawo, vamwe ndiwo vasina kuita zvakanaka. Takaonawo musiyano mukuru kwazvo pakukura kwaiita vanakomana mumusha dzamara vazoitawo mhuri dzawo. Paida kuti mwana wese awane mukana wakafanana wekudzidziswa kuti aite zvakanaka.”
VaMusona vanotiwo vanoshanda nenherera kana kuti vana vanenge varambwa nevabereki kana mubereki mumwe chete zvikuru baba. Vati vanakomana vanokura vasina vabereki vanonetseka zvikuru muhupenyu. Vanoti seMVPVM vanoti iri idambudziko guru uye vari kuyedza kurigadzirisa nekushanda nevana ava.
VaMusona vanoti, “Muchidimbu mwanakomana ane matambudziko mazhinji ekuti pakashaika ungabatsire hupenyu hwake nemhuri yaangazowe nayo hakuna kana nechakanaka chaanokwanisa kuzoita. Isu tiripo kubatsira vakomana nekusimudzira magariro awo.”
Vanoti nyaya yekusakura zvakanaka mumba ine rudo zvinokonzera kuti vakomana vechidiki vasvute nekunwa zvinodhaka uye kupedzisisa vapara mhosva dzinovapinza mumajeri.
Hurukuro naVaOliver Musonza naVaStanford Sungarombe